ဘာလို့ ကလေးမရတာလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဒီနေ့ခေတ်မှာ တချို့သောစုံတွဲတွေမှာ ကလေး လိုချင်ပေမယ့်လည်း ကလေးမရနိုင်တဲ့ပြဿနာကို ကြုံတွေ့လာကြရပါတယ်။ ဒါက တိကျတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖို့ခက်သလို ဆွေးနွေးဖို့ခက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကလေးမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆတွေလည်း ရှိပါတယ်။
1. မျိုးမအောင်ဘူး (ကလေးမရဘူး) ဆိုတာ ဘာလဲ
စုံတွဲတစ်တွဲမှာ အကာအကွယ်မပါဘဲ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိပါရဲ့နဲ့ ၁၂ လနဲ့အထက် ကြာတဲ့အထိ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်တဲ့ မျိုးပွားစနစ်ဆိုင်ရာရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ဒီနေ့ခေတ်တွေ့ရှိချက်တွေအရ စုံတွဲ ၈ တွဲမှာ ၁ တွဲလောက်က ကလေးမရနိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
2. ကလေးမရနိုင်တဲ့ပြဿနာက အမျိုးသမီးတွေမှာပဲပြဿနာရှိလို့ မဟုတ်ပါဘူး။
များသောအားဖြင့် ကလေးမရရင် အမျိုးသမီးရဲ့ပြဿနာလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့။ ကလေးမရတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ 30% လောက်က အမျိုးသမီးတွေကြောင့်၊ 30% က အမျိုးသားတွေကြောင့်နဲ့ ကျန်တဲ့ 40% ကတော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပြဿနာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ဘာအကြောင်းအရင်းမှန်း မသိတာလည်း ရှိပါတယ်။
3. ကလေးမရနိုင်တာက အသက်အရွယ်ကြောင့်ချည်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကလေးရနိုင်ချေလည်း နည်းလာတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူပါဘူး။ ပြီးတော့ အသက် ၃၅ နှစ်ရောက်လာတာနဲ့ ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အသက် ၄၀ မှ ကလေးရတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။
4. ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ကလေး မရကြတာလဲ
အကြောင်းအရင်းကတော့ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အကြောင်းအရင်း သေချာမသိပေမယ့်လည်း မျိုးရိုးဗီဇပြဿနာ၊ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ (ကာလသားရောဂါ)၊ တခြားရောဂါတွေ၊ သုတ်ပိုးအထွက်နည်းခြင်း၊ သုတ်ပိုးလှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း၊ ဟော်မုန််းမညီမျှခြင်း စတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ကလေးမရလို့ လာပြရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အစာစားသောက်မှုပုံစံတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာပါတယ်။ ဒီထဲကမှ တွေ့ရှိချက်တစ်ခုက အမျိုးသားတွေမှာ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်ချိန်ကုန် ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် သုတ်ပိုးထွက်နည်းခြင်း၊ သုတ်ပိုးလှုပ်ရှားမှု ကျဆင်းခြင်းနဲ့ သက်တမ်းလျော့ကျခြင်း၊ အမျိုးသားဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ testosterone နည်းစေခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ ကလေးမရနိုင်ဖြစ်စေတယ်လို့ တွေ့ရှိပါတယ်။ 85% လောက်သော အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်တွေထဲမှာ ဖုန်းတွေ ထည့်လေ့ရှိတဲ့အတွက် ဒါကလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Dr. Mya Myo Myo Swe (www.drmyanmar.com)
၅.၇.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
စားတာသောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ရင် လူတွေဟာ အကျင့်ကြီးတစ်ခုစီ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ - မနက်စာမစားဘဲကို မနေနိုင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် စားပြီးဆို ပန်းကန်ကိုပါ ပြောင်အောင်လျက်တာပဲ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီအစားအသောက်အမူအကျင့်တွေဟာ ကလေးဘဝကတည်းက ဖြစ်လာတာပေမယ့် ကြီးလာမှ ပြုပြင်လို့လည်း နောက်မကျပါဘူးနော်။
အညိုအမည်းစွဲခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် ရှေးဦးကုသမှု
၃.၇.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
1. အညိုအမည်းစွဲခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
● အဝတ်သန့်သန့်ထဲတွင် ရေခဲတုံးထည့်ပြီး ရေခဲဖတ် ကပ်ပေးပါ။
● ဖြစ်ပြီးပြီးချင်း ၁ ရက် ၂ ရက်အတွင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ကပ်ပေးပါ။
● တစ်ကြိမ်ကပ်လျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
● ဒဏ်ရာရတဲ့ လက် (သို့) ခြေထောက်ကို...